‘शिलान्यास गर्दैमा सडक बन्ने भए किन १६५ मात्रै, एक लाख सडक शिलान्यस गर न’
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले शिलान्यास गर्दैमा सडक बन्ने भए १६५ मात्रै नभएर एक लाख सडक एकै पटक शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलाीलाई चुनौति दिएका छन् । ओलीले शनिबार ए…
हे बाबा ! कति पटक राजीनामा माग्छौ ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउ नः ओली
काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन फेरि चुनौति दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा शनिबार उनले उक्त चुनौति दिएका हुन् । माओवादी क…
मेलम्चीको परिकल्पनाकार राजा वीरेन्द्र हुन, किसुनजीले मुखरित मात्रै गरेका हुनः कमल थापा
काठमाडौं । मेलम्चीबाट पानी ल्याई काठमाडौंका जनताको घरघरमा पुर्याउने आयोजनाको परिकल्पनाकार नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) नभई राजा वीरेन्द्र भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले ब…
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्…
सरकारलाई अझै पनि काम गर्न नदिइएको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनःस्थापनापछि पनि सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भका क्रममा उनले संसद तानातानको थलो भएको भन्दै सरकारले अझै पनि का…
अहिले मुग्लान (माओवादी) पस्ने हो भने पछि घर (एमाले)मा फर्किन नदिने बास्कोटाको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले एमाले चाहिने भए अहिले घरमै बस्न माधव नेपाललगायतका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बास्कोटाले अहिले म…
सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी प्रवर्द्धनमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । अतिकम विकसित र भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशहरूको उन्नतिका निम्ति सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पर्यटन र कृषि प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतामा नेपालले जोड दिएको छ । बहुक्ष…
मेरो पार्टीको अध्यक्ष भएर ओलीले गरेका बर्बादिका लागि म दुनियाँसँग माफी माग्छुः भुसाल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका निलम्बित नेता घनश्याम भुसालले केपी ओलीले बर्बाद गरेको भन्दै उक्त बर्बादीका लागि आफूले माफी मागेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई अनुशासनको कारवा…
नेकपा ब्युँताउने प्रचण्डको आग्रह सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैस…